Chii chakanakira Swiss CNC machine kufananidzwa kusanganiswa kudzora lathe? - China Shandong New Ankai-Kitco
Chii chakanakira Swiss CNC machine kufananidzwa kusanganiswa kudzora lathe?
NeSwiss cnc machine ndohwaJehovha nemagadzirirwo kubudiswa zvokushandisa, uye rinogona kupedza kunzwisisa machine motokari, azvikuya, kuchera, hakunakidzi, kuveza uye kuveza panguva imwecheteyo. Zvinonzi ainyanya kushandiswa batch mangé kubudiswa zvakarurama Hardware uye mugodhi chaiwo serin'i non-mureza nhengo.
Nekuti chimiro kufamba muchina akasiyana zvetsika kusanganiswa kuzvidzora lathe, iro machine kushanda zvakanaka uye machine zvakarurama pamusoro kufamba muchina akakwirira kupfuura NC lathe. Tora nokurwadziwa pamwe biaxial urongwa uhwu zvakagadzirwa mudziyo, anoponesa zvikuru kubudiswa kutenderera nguva, chinjanai nguva nzira uye mudziyo kuti muchina mudziyo kuburikidza vachigurisira banga, Multi chokushandisa chiteshi bindepinde uye neshinda Chip kunobudirira axial uchifamba pindana kushanda, zvakananga chokurukisa Indexing shanda kaviri panguva kugadzira, kuatapudza Vacuum nguva. Chip nokuveza turusi chinoita basa rinokosha mune machine gadziriro chokurukisa uye workpiece clamping zvikamu. It inopa vimbiso yakasimba kuramba machine kururama. In nemaonero mwoyo muchina pamusika, 38mm iri guru reko kubudiswa dhayamita, izvo zvinoita kuti kufamba muchina anopindura nani zvikuru zvakarurama akabatana kugadzira musika. Nyaya dzino dzakatevedzana muchina maturusi zvinogona vakagadzirira pamwe otomatiki dzichifura mudziyo, izvo anoziva zvakazara zvoga kugadzirwa kuroorwa muchina mudziyo, kunoderedza basa mutengo uye zvigadzirwa zvakaipa kugadzirwa kwacho, uye zvinogona kushandiswa pave yakawanda zvakarurama mugodhi zvikamu.
The machine kunyatsoshanda uye machine kururama pane NC lathe rave Qualitative munogodorerei, nokuda miviri urongwa mudziyo, achidzikisa kubudiswa kutenderera nguva kwazvo, uye nguva kuchinjana mudziyo uri muchina mudziyo kuburikidza vachigurisira banga, Multi chokushandisa chiteshi bindepinde basa, shinda achicheka zvinobudirira axial uchifamba pindana kushanda, zvakananga chokurukisa Indexing basa mbiri nguva apo kubudiswa, kuona nguva pfupi. Nokuveza turusi anogara machine psac ari clamping chikamu chokurukisa uye workpiece, iyo dzinovimbisa dzose nemazvo pamusoro machine kururama. Panguva ino, kufadza machine dhayamita mwoyo muchina pamisika iri 38mm, uye ine mukana mukuru zvakarurama akabatana kugadzira musika. Nyaya dzino dzakatevedzana muchina maturusi zvinogona vakapakata otomatiki dzichifura mudziyo pakuziva otomatiki kugadzirwa rimwe chete muchina mudziyo, uye kuderedza basa mutengo uye mwero chigadzirwa zvakaipa. Zvakakodzera chaizvo kuti vakawanda kugadzirwa zvakarurama mugodhi zvikamu.